कक्षा १२ को परिक्षा दिएका बिद्यार्थीहरुलाइ आयो अत्यन्तै खुसिको खबर ! – Sandesh Press
December 22, 2020 158
कक्षा १२ को परिक्षा दिइरहेका बिद्यार्थीहरुलाइ आयो अत्यन्तै खुसिको खबर ! परिक्षा सुरु भएको कक्षा १२ को नतिजा प्रकाशन गर्ने मिति तोकियो ! कक्षा १२ को परीक्षा सम्पन्न भएको १ महिना भित्रै परीक्षाफल प्रकाशित गर्ने बोर्डको तयारी छ । बिद्यार्थीको अरु थप खेर समय खेर जान नदिने उदेश्यले नतिजा चाडै प्रकाशन गरिने जनाइएको छ ।
पोखरा विमानस्थलका प्रमुख भोला गुरागाइँका अनुसार जहाज पोखरा विमानस्थलमा सुरक्षित अवतरण गरेप*
सामान्यतयाः आकासमा कुनै प्राविधिक गडबडी भएमा, जनकपुरको मौसम सफा नभएमा अवतरण हुछि मात्र यात्रुले आफूहरु जनकपुर नभइ पोखरा आएको पत्तो पाएका थिए ।न नसकी विकल्प खोज्नु सामान्य हो । तर, शुक्रबार त्यस्तो कुनै अवस्था थिएन । गुरागाइँ भन्छन्, सेफ्टिका कारण जहाज पोखरा आएकै होइन।
Prevपोखराको लागि उडेको विमानमा घट्यो विश्वासै गर्न नसकिने घटना, पाइलट,यात्रु सबैको होश उड्यो !
Nextछोरा सुशान्त स्वर्गीए भएसँगै विक्षिप्त बनेका उनका बुबा केकेको स्वास्थ्य गम्भिर बन्दै